Paul Pogba oo ku warramay hadal rajo-geliyay taageerayaasha Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 30 Mar 2019. Inkastoo horyaalka Premier League iyo guud ahaan ciyaaraha kala duwan ee dunida ay hakad ku jiraan kaddib faafidda Coronavirus awgeed, ciyaartoyda kubadda cagta ayaa baraha bulshada saaxiib dhow kula noqday taageerayaashooda.
Laacibka Manchester United ee Paul Pogba ayaa tilmaamay in kooxdiisa ay dooneyso inay ciyaaraha soo laabtaan, sidoo kalena uu koobab kula guuleysto Red Devils.
Pogba oo la la xiriirinayay ka tagista Old Trafford iyo ku laabashada Juventus ama u hayaamidda Real Madrid ayaa farriin qurux badan u diray taageerayaasha Man United.
“Guriga jooga, nabad ahaada,” ayuu Pogba ku yiri wictaan muuqaal ah oo uu la wadaagayay Jesse Lingard si toos ah loogaga daawanayay bogga rasmiga ah ee kooxda, waxaana hadalkiisa uu sii raaciyay “Sii wada taageeradiinna United.”
“Waxaan ku rajo weynahay in wax walba ay hagaagi doonaan ciyaartana aan ku soo laabanno.
“Waxaan rajeynaynaa inaan idin tusno sida aan diyaarka u nahay iyo inaan doonayno inaan ku soo laabanno waddada guulaha koobabka.
“Isla xiriira, nabad ahaada annagana mar dhow garoonka ayaan kusoo laabanaynaa.” ayuu yiri Pogba.
Kubbad-qaabeeyaha Faransiiska ah ayaa ka soo kabanaya dhaawac dhanka anqowga ah, waxaana uu inta muuqaalkaas kula jiray saaxiibkiis Lingard dib u milicsaday ku guuleysigii Europa League ee 2017 uu ku hoggaamiyay Jose Mourinho.
Waxa uu hoosta ka xarriiqay inay billawga xilli ciyaareedka ku xisaabtameen inay koobkaas qaadaan si ay xilli ciyaareedka xiga ay ugu soo baxaan UEFA Champions League, waxaana ugu dambeyn uu ku dhiirri-geliyay taageerayaasha Red Devils in ay kooxdooda tahay mid koobab ku guuleysan karta.